tihar - Arthasansar
दाजुभाइले एक अर्कालाई लगाइदिए भाइटीका
शनिबार तिहारको मुख्य दिन भाइटीका । ...
तिहारलाई झिलिमिली पर्वको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । ...
शनिबार, २० कार्तिक २०७८, १५ : ३७
कत्तिक कृष्ण पक्षको औंसीमा लक्ष्मी पूजा गरिन्छ । कात्तिक कृष्ण पक्षको औंसीको रातलाई वर्षका चार महत्वपूर्ण रातहरूमध्येको सुखरात्री पनि भनिन्छ । यस दिन स्त्री जाति विशेषगरी कुमारी केटीहरूले घरघरै गई...
विहीबार, १८ कार्तिक २०७८, ०७ : ११
तिहारमा ग्यापुबाट सामान खरिद गर्दा अप्रिलिया स्कुटर जित्ने अवसरसँगै आकर्षक अफर
नजिकिएको पर्व तिहार र छटको विशेष अवसरमा ग्यापुले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ । ...
बुधबार, १७ कार्तिक २०७८, १६ : २३
पूजाभन्दा महँगो सजावट, प्रतिस्पर्धामा लक्ष्मी पूजा
सप्तरीका विभिन्न स्थानमा लाखौं खर्च गरेर प्रतिस्पर्धामा लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ । ...
बुधबार, १७ कार्तिक २०७८, ११ : ४०
आज काग तिहार, यमपञ्चक सुरू
हिन्दु धर्मालम्बीहरूको दोस्रो ठूलो महानचाड तिहारको आज पहिलो दिन । आजदेखि यमपञ्चक सुरु भएको छ । कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितियासम्मको पाँचदिन यमराज आफ्ना सबै कारम छाडेर बहिनी यमुनाकहाँ...
बुधबार, १७ कार्तिक २०७८, ०६ : ०६
धनतेरसका दिन पाटनमा देखिएको रौनकता (फोटोफिचर)
आज धनतेरससँगै हिन्दुहरूको दोस्रो महान् चाडको रूपमा रहेको तिहारले पनि पाइला टेकेको छ । यस दिन विशेष रूपमा भगवान् धन्वन्तरीको पूजा आराधना गरिन्छ साथै धनका देवता कुवेर तथा लक्ष्मीको पनि...
मंगलबार, १६ कार्तिक २०७८, १७ : १४
तिहारै आयो, सयपत्री टिप्न भ्याइनभ्याइ (फोटो फिचर)
नागार्जुन नगरपालिका बतासेडाँडामा सयपत्री फूल टिप्दै किसान । ...
मंगलबार, १६ कार्तिक २०७८, १६ : १९
राति १० बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न पाइने
तनहुँमा देउसी भैलो राति १० बजेसम्म मात्र खेल्न पाइने भएको छ । देउसी भैलो खेल्दा न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । ...
मंगलबार, १६ कार्तिक २०७८, १३ : ०१
आज धनतेरस: केके किनिन्छ धनतेरसका दिन ?
आज धनतेरससँगै हिन्दुहरूको दोस्रो महान् चाडको रूपमा रहेको तिहारले पनि पाइला टेको छ । ...
मंगलबार, १६ कार्तिक २०७८, ०९ : ०४
आज धन्वन्तरी जयन्ती र राष्ट्रिय आरोग्य दिवस
आज आयुर्वेद चिकित्साशास्त्रका प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तरीको अवतार जयन्ती । ...
मंगलबार, १६ कार्तिक २०७८, ०८ : ५५
भाइटीकाको साइत ११:०२ बजे
यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरिएको छ । ...
सोमबार, १५ कार्तिक २०७८, १३ : १३
सयपत्री सप्रियपछि किसान मक्ख : चितवनमा ३५ बिघामा फूलखेती, तिहारलाई साढे दुई लाख माला
तिहार नजिकिँदै जाँदा चितवनमा सयपत्री फूल तयार भएका छन् । यहाँका बारीमा सयपत्री फूल ढकमक्क फुलेका छन्, तिहारकाे पर्खाइमा । अबको दुई/तीन दिनमा फूल टिप्ने तरखरमा छन्, यहाँका किसान । सयपत्री फूलखेतीमा पछिल्ला...
सोमबार, १५ कार्तिक २०७८, ०८ : ३३
तिहार नजिकिएसँगै गुण्डुकी सरस्वती नगरकोटीलाई बारीमा फूलेका फूललाई टिप्न भ्याइनभ्याई छ । ...
आइतबार, १४ कार्तिक २०७८, १२ : ४६
यस वर्षको तिहारमा मखमली फूलको मालाको खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म पर्ने भएको छ । कोरोना महामारी र पछिल्लो समय परेकोे बेमौसमी वर्षात्ले फूलखेती प्रभावित भएको छ । यसले आन्तरिक...
सोमबार, ०८ कार्तिक २०७८, ०५ : ५८
अर्थ संसार, काठमाडौँ - प्रत्येक वर्ष कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयाका दिनसम्म मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व आज दोस्रो दिन किजापूजा गरेसँगै समाप्त भएको छ । ...
मंगलबार, ०२ मंसिर २०७७, १५ : १०
भाइटीकाको उत्तम साइत ११ः३७
अर्थ संसार, काठमाडौं - प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन् ...
सोमबार, ०१ मंसिर २०७७, १० : ०६
आज तिहारको चौथो दिन : गाई, गोवर्द्धन र गोरु पूजा गरी मनाइँदै
अर्थ संसार, काठमाडौं - यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र गोरु जोत्ने हलीको समेत पूजा गरी हली तिहार पर्व मनाइँदैछ । ...
आइतबार, ३० कार्तिक २०७७, ०७ : ३०
प्यालाको ब्यापार अपरंपार (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–तिहार झिलिमिलि बत्ती बाल्ने चाड हो । यस चाडमा थरीथरीका विजुली बत्ती बालिन्छ । लक्ष्मी भित्र्याउन माटोको प्यालामा तेल हालेर वत्ती बालिन्छ । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, २१ : ०१
सप्तरंगी टिकाको फस्टाएको ब्यापार (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–तिहारका बेला प्रयोगमा आउने सप्तरंगी टिकाको ब्यापार पनि निकै हुने गरेको छ । भाइटिकाका दिन दाजुभाइ दिदीबहिनीले एक अर्कालाई निधारमा सप्तरंगी टिका लगाइ दिन्छन् । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, २० : ५५
तिहारमा फूलको सट्टा प्लास्टिकको माला (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–तिहारमा फूलको ब्यापार निकै हुने गर्छ । भाइटिकामा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले एक अर्कालाई टिका लगाइसकेपछि माला लगाइ दिने चलन छ । घर सजाउन पनि फूलको मालाको प्रयोग गरिन्छ । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, २० : ४९
शिरको शोभा टोपीको तिहारमा बढ्दो ब्यापार (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–टोपीले शिरको शोभा दिन्छ । नेपालीहरुको राष्ट्रिय पोशाकका रुपमा समेत टोपीलाई लिइन्छ । तिहारका अबसरमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइ दिएपछि टोपी लगाइदिने चलन छ । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, २० : ३९
भाँडाको किनबेच तिहारमा बढी (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–तिहारका बेला भाँडाको ब्यापार पनि चम्किएको छ ।यतिखेर बजारमा पुजा गर्ने भाँडाकुँडा किन्नेहरुको भिड देखिन्छ । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, १० : ४५
धनधान्यकी देवीको फोटो बेचेर धन कमाउँदै ब्यवसायी (फोटो फिचर)
अर्थ संसार, काठमाडौं–तिहार धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने चाड हो । लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मी घरमा भित्र्याउन सके सम्पत्तिको कहिल्यै अभाव नहुने जनविश्वास छ । त्यसैले हरेक घरमा यस दिन लक्ष्मीको प्रतिमा...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, १० : ३५
आज कुकुर तिहार : यमराजको ढोकामा बस्ने कुकुरले बाटो छोडिदिने विश्वास !
अर्थ संसार, काठमाडौं - यमपञ्चकको दोश्रो दिन आज कुकुरको पूजा गरी मनाइँदैछ । ...
शनिबार, २९ कार्तिक २०७७, ०७ : ००
तिहार आयो : बजारमा मिठाइ, फलफूल र मसलाको बढ्दो माग (फोटोफिचर )
दशैंको चटारो नसकिदै अर्को ठूलो चाड तिहारले नेपालीहरुको संघारमा पाइला टेकेको छ । दशैं लत्ताकपडा, मासु र मदिराको चाड थियो । तिहार भने गरगहना, भाडाकुडा, मिठाइ, मसला, फूल र फलफूलको...
शुक्रबार, २८ कार्तिक २०७७, ११ : ०६
तिहारको पहिलो दिन आज काग तिहार, कसरी मनाउने ?
अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपालीहरुको दोश्रो ठुलो चाड तिहार सुरु भएको छ । ...
शुक्रबार, २८ कार्तिक २०७७, ०७ : ३२